यो पुस्तिका अध्ययन गर्न समय निकाल्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद छ। यसबाट तपाईंले यहोवाका साक्षीहरू को हुन्‌ भनेर चिन्न सक्नुभयो, हाम्रो गतिविधिबारे थाह पाउनुभयो र हाम्रो सङ्‌गठनले के-के गर्दैछ भनेर जान्न सक्नुभयो। आशा छ, आज यहोवाको इच्छाअनुसार चल्ने व्यक्तिहरू यहोवाका साक्षीहरू नै हुन्‌ भनेर बुझ्न तपाईंलाई यस पुस्तिकाले मदत गऱ्यो। परमेश्वरबारे ज्ञान लिइरहनुहोस्, आफूले सिकिरहेको कुराबारे आफ्नो परिवार र साथीभाइलाई बताउनुहोस् र ख्रीष्टियन सभाहरूमा हामीसित नियमित तवरमा सङ्‌गत गरिरहनुहोस् भनेर हामी तपाईंलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं।—हिब्रू १०:२३-२५.
यहोवा तपाईंलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँबारे जति धेरै सिक्नुहुन्छ, उहाँको प्रेम पनि त्यति नै धेरै महसुस गर्नुहुनेछ। तब तपाईं पनि आफूले सकेजति उहाँलाई प्रेम गर्न उत्प्रेरित हुनुहुनेछ। (१ यूहन्ना ४:८-१०, १९) तर परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कुरा आफ्नो दैनिक जीवनमा कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ? उहाँले तोक्नुभएको असल र खराबको स्तरअनुसार जीवन बिताउँदा कसरी तपाईंकै भलो हुन्छ? अनि हामीसँगसँगै मिलेर यहोवाको इच्छाअनुसार चल्न तपाईंलाई केले जुरमुऱ्याउनेछ? तपाईंको बाइबल शिक्षकले खुसीसाथ यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्‌। यसरी चित्तबुझ्दो जवाफ पाएपछि तपाईं र तपाईंको परिवारले ‘आफूलाई परमेश्वरको प्रेम पाउन लायक बनाइराख्न अनि अनन्त जीवनको आशा’ राख्न सक्नुहुन्छ।—यहूदा २१.
परमेश्वरको इच्छाअनुसार चलिरहन “आफूलाई परमेश्वरको प्रेम पाउन लायक बनाइराख” पुस्तकबाट अध्ययन गर्नुभए कसो होला?